‘Aguero iyo Suarez waxaa ka adag Giroud”, waxaa sidaas yiri daafac Europe laga qadariyo oo ka wada hor tagay…..? – Gool FM
‘Aguero iyo Suarez waxaa ka adag Giroud”, waxaa sidaas yiri daafac Europe laga qadariyo oo ka wada hor tagay…..?
Kaafi June 13, 2016
(London) 13 Juunyo 2016. Mid ka mida daafacyada iminka loogu jecelyahay Europe, gaar ahaan kuwa soo koraya ayaa aaminsan in Olivier Giroud ay adag tahay in la raacdo marka la bar bar dhigo Sergio Aguero iyo Luis Suarez.
Weeraryahananada Barcelona iyo Manchester United waxaa loo aqoonsan yahay in ay yihiin kuwa dunida ugu halista badan halka Giroud ay ku ooriyaan jamaahiirta Fraance.
Hase ahaatee, John Stones oo ay bartilmaameedsanayaan kooxo waa weyn sida Chelsea, Manchester United, Manchester City iyo Barcelona ayaa qaba in uu dhaliyaha Arsenal uu kuwaas ka dhib badan yahay.
‘Waxaan ula jeedaa waa ciyaaryahano wanaagsan, oo leh dhaq dhaqaaqyo aan la aamini karin. Daacaddii, waa in aan dhahaa Olivier Giroud, ma garan kartid sida uu u awood badan yahay,’ ayuu yiri xiddiga reer England mar la weydiiyey in uu kala xusho saddexddooda.
‘Marka uu ku soo dhowaado wuu ku tiirin karaa taabashadiisana waa cajiib’.
Ololihii hore Giroud waxa uu dhaliyey 16 gool 38 kulan oo uu Arsenal u saftay halka Aguero uu shabaqa la helay 24 gool 30 kulan.
Suarez, horyaalka La Liga waxa uu kabaha dahabka ah uga qaaday Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo 40 gool oo uu 35 kulan ku ansixiyey.
COPA AMERICA: Brazil oo laga soo cirib tiray tartanka kaddib gool gacanta looga dhaliyay...(Peru iyo Ecuador oo u soo gudby wareega 8-da)+SAWIRRO